စနေသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း…. » Myanmar Family Life
စနေသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း….
ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။
စနေသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊သြဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်း၊ အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ခြင်း ၊ မင်းစိုးရာဇာကူညီမစခြင်း၊ပက်သက်ရခြင်း ၊ အလုပ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ရန်အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်များပေါများပြီး ၄င်းတို့အပေါ် ကံအသာစီး အနိုင်ရရှိခြင်း၊ အခြွေအရံပေါများခြင်း ၊ မိမိကိုကြည်ညိုလေးစားချစ်ခင်သူများပေါများခြင်း၊အပျို၊လူပျိုများ လူလိမ်ခံရတတ်ခြင်း ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများလက်ဆောင်ရခြင်း တို့ ကြုံရလတ္တံ့။ လုပ်ငန်းသစ်များစတင်သင့် ။ စီးပွား အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးချဲ့သင့်။ လုပ်ငန်းစီးပွား လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွားမြင့်တက်လတ္တံ့။ ကံကောင်းအံ့။
ငွေရေးကြေးရေး – မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်လာအံ့ ။ လွဲချော်ပြီးမှ အောင်မြင်အံ့ ။ ရမလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးများ ကြန့်ကြာနေပြီး ၊ မရဘူးဟုထင်ရသောငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိအံ့ ။ ကောင်းမလိုလိုနှင့်ညံ့ပြီး ညံ့မလိုလိုနှင့်ကောင်းအံ့။ ၀င်သလောက် ပြန်ထွက်နေအံ့ ။ အလှူအတန်းများလုပ်ရအံ့ ။
ငွေရေးကြေးရေး အထူးယတြာ – စီးနေသောရေထဲတွင် ငါး (၇)ကောင် မကြာခဏဘေးမဲ့လွှတ်ရင်း ဆုတောင်းပါ ။ ကိတ်မုန့်ကို ချိုင့်ထဲထည့်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မကြာခဏပို့ပေးပါ။ အိမ်ရှေ့ကို ရေ (၄)ခွက် မကြာခဏ ပက်ပေးပါ ။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – အာလူးဟင်းနှင့် ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို အာလူးကြော်ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ( အ ဥ ရ ယ လ ၀ ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၁) နှင့် (၄) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေး – ကောင်းမလိုလိုနဲ့ ညံ့သွားတတ်။ ညံ့မလိုလိုနဲ့ ကောင်းသွားတတ်။ အသေးအဖွဲလေးကအစ ညှိုနှိုင်းရခက်နေတတ်။အချစ်ရေးကံကောင်းသည်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း မိန်းမလည် ယောင်္ကျားရှုပ်များနှင့်တွေ့ရတတ်ခြင်းကို သတိပြုအံ့။ ချစ်သူ၏ ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်လိမ်ညာခြင်းကို ခံရတတ်။ ချစ်သူ၏ မာယာပရိယာယ်ကြားမှာ နစ်မျောသွားတတ်။ သတိပြုသင့်။
အိမ်ထောင်ရေး – ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းပြီး ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မှုတွေ များနေအံ့။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမကဲ့သို့ခင်မင်ရသူများ ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများကြောင့် လင်နဲ့မယား အဆငမပြေဖြစ်တတ်။ အမြင်တွေအယူအဆတွေ မကြာခဏကွဲလွဲအံ့။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးတွင် ဗုဒ္ဒဟူးသားသမီးများ ၊ နာမည်တွင် ရ ယ လ ၀ ပါသောသူများ ၊ မြစ်နား ချောင်းနား ရေနားနီးသောသူများ ၊ အအေး ၊ အရက်ဘီယာ ၊ ရေသန့် ၊ အလှအပ ၊ အနုပညာ နှင့်ပက်သက်သူများ ၀င်ရှုပ်တတ်။(သတိထားရန်)
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အထူးယတြာ – နှစ်ယောက်ဓါတ်ပုံကိုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပ်။ ထမင်းပေါင်းအိုးအလွတ်ထဲတွင် မကြာခဏထည့်ပေးပါ။
ပညာရေး – မိမိရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်လတ္တံ့။ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့ရအံ့။ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး အကူအညီကောင်း အဆက်အသွယ်ကောင်း အပံ့ပိုးကောင်းများပေါ်လာလတ္တံ့။ ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး မင်းစိုးရာဇာအကြီးအကဲ ၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ ကူညီမစလတ္တံ့။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော ပေါင်မုန့်(၅)ချပ်၊ လက်ဖက်ရည်(၁)ခွက်၊ ပန်းအနီ(၆)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ပန်းအနီ(၆)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။
( စာမေးပွဲဖြေ၊ အင်တာဗျူးဖြေ၊ အလုပ်လျောက်သည့်အခါများတွင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်)
ကျန်းမာရေး – ၀မ်းဗိုက် ၊ လေ ၊ လည်ပင်း ၊ ရင်ဂေါင်း ၊ လက် ၊ ရေချိုးမှားခြင်း နှင့် ပက်သက်သောရောဂါ ဝေဒနာများ သတိထားသင့်။(တပ်အပ်ဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ ။ သတိထားရန်ဖြစ်သည်)
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – စနေနေ့ည …။ နှီးတောင်း (သို့မဟုတ်) ဓါတ်ဗူးအစုတ်ထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။ နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၅)နာရီ(၄၀)မိနစ်တိတိတွင် အုန်းသီးပါသောမုန့် (၆)ခု ၊ လက်ဖက်ရည် (၄)ခွက် ၊ ပန်းအ၀ါ (၅)ပွင့် ၊ သောက်တော်ရေ (၄)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၄) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
၂၀၁၉ ခုနှစ်အ တွက် ပထမဆုံးမုန်တိုင်း ဖြစ်လာပါတော့မယ် April 26, 2019
ခင်လှိုင်ဟာ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါဆိုတဲ့ ညီနန္ဒ April 26, 2019
ရေထဲနှစ်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်အား ကူညီ ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါပြီ April 26, 2019
ကရင်ပြည်နယ် ဆံတော်ရှင်ဇွဲကပင်တောင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား April 25, 2019
ရန်ကုန်တွင် ရဟတ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေ April 25, 2019